Ingelosi kaJeliel Guardian: Uphawu lokuchuma kunye nokunyaniseka komtshato - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ingelosi kaJeliel Guardian: Uphawu lokuchuma kunye nokunyaniseka komtshato
UJeliel umele ukuthembeka eluthandweni. Uyingelosi yakho ekugcinayo, ukuba uzalwe phakathi kuka-Matshi 26 ukuya ku-30. Nazi iimpawu zakhe kunye nendlela yokubiza kuye.
Ukuba uzalwe phakathi kuka-Matshi wama-26 nowama-30, ingelosi yakho ekugcinayo nguJeliel, okuthetha ukuba 'ngumncedi kaThixo', ukunceda ukwahlula phakathi kokungalunganga kunye nobunyani. Ngaphantsi komqondiso we-Aries, le ngelosi eyindoda ikhuthaza ukuzala kunye nokunyaniseka emtshatweni. NgoNeptune noSaturn njengamandla akhe, umele umlilo. Abemi baseJeliel badibeneyo kwaye bayayixabisa ukonwaba kwenyama. Ukuhlala benyanisekile eluthandweni, bathembekile phantsi komthetho. Fumanisa iimpawu lo mntu wasezulwini anokukusikelela ngazo.
UJeliel, ingelosi engumgcini yama-Aries (ukusuka nge-26 kaMatshi ukuya kwi-30 kaMatshi)
UJeliel kunye nepentente yakhe
Kutheni unxibelelana naye?
Umncedisi uJeliel unikela ubulumko nothando. Uhamba nawe ebomini bakho njengesibini kunye nakubudlelwane bakho obahlukeneyo. Enkosi ngobubele bakhe, uyakuvumela ukuba uphile ngokuzolileyo, nokuba kukho imiqobo. Usombulula iingxaki phakathi kwezibini nokungavisisani kwazo. Unguye uphawu lomanyano olwahlukileyo phakathi kwezini ezibini. Ewe, ukuze ubomi buvisisane, uyakukhuthaza ukuba uhlakulele uthando nothando kwabanye.
Fumanisa zonke iimpawu zokhuselo zengelosi zikaJeliel
Iimpawu kunye namandla:
Uphuhliso, ubuntlola, ukuchuma, umsebenzi
Iiserafi, ezinjongo zazo ikukucoca
Keter oko kuthetha isithsaba
I-Metatron, eyona ngelosi inamandla
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza okwesibhakabhaka
I-Amethiste, Aquamarine, Fluorite, Jade, Labradorite, Ilitye, iTurquoise, iZircon
IMercury kunye neSaturn
* Ii-sefirots ngamagunya okudala alishumi eKabbale. Bazibonakalisa beme ngomthi waseKabbalah, apho iSefirot nganye ingamandla kaThixo uMdali.
UJeliel yingelosi egcinayo yabantu abangama-Aries abazalwe phakathi kuka-Matshi 26-30: Banjani aba bantu?
Abo bazalelwe phantsi kwempembelelo yakhe bonwabile kwaye bazonwabisa ngeziyolo zenyama. Ngokunyaniseka ekubeni lixabiso labo lokuziphatha nelokomoya, abo bazalwa phantsi kokhuseleko lukaJeliel baya kuhlala bethembekile emthethweni. INkosi yezolimo, ixhasa amafama (abo bachumisa umhlaba) kunye nezibini. Ekugqibeleni, UJeliel unxulunyaniswa nesono esibulalayo sokubawa.
Beka iiPsychics zethu kuvavanyo apha kwaye uthathe inyathelo elisondeleyo ekufumaneni ikamva lakho
Izizathu zokuba kutheni kufuneka unxibelelane noJeliel
Ngokunxibelelana nale ngelosi, unokuba nethemba lokufumana ukomeleza amandla, oko kukuthi, uthando ngakumbi ngobomi, iingcinga eziluncedo nezakhayo kunye nemibono yokoyisa ubunzima, kunye nokuzola ngakumbi kubudlelwane bakho bothando. Ewe uyacetyiswa ukuba unxibelelane noJeliel ukuze buyisela uxolo kubudlelwane bezothando okanye ubudlelwane, Ukomeleza ubudlelwane. Ukwanoxanduva lokunyaniseka eluthandweni.
ngeenkwenkwezi ilanga inyanga liphuma
UJeliel waziwa ngokuba yingelosi elumke kakhulu, nothando kunye nokukhanya okuya kukuvumela ukuba ufumane izisombululo kwiingxaki zobomi kunye noxinzelelo lweemvakalelo.
Ingelosi yomgcini uJeliel ibonelela:
Ukukwazi ukusombulula iimbambano ezithile
Isakhono sokwahlula phakathi kwenyani kunye nefantasy
Ungamfowunela njani uJeliel
Iintsuku zikaJeliel kunye neeyure zokuphinda asebenze kuzo zi-10 kaJanuwari, nge-22 kaMatshi, nge-4 kaJuni, nge-18 ka-Agasti nakwi-30 ka-Okthobha phakathi kwe-00: 20 ne-00: 40.
Ukunxibelelana nesithunywa sakho sokugcina, yitsho lo mthandazo ngesiqhumiso se-Oedipus:
Egameni lendalo iphela mna (nditsho igama lakho) ndibiza uthando lukaJeliel;
Ngamana nangona igama lakho lothando luhlala lubuyela kum Angel Jeliel Ndiyakubongoza ukuba wenze uthando olunyanisekileyo noluthembekileyo kubomi bam bemihla ngemihla.
Ingelosi uJeliel, ingathi indalo iphela ingandinika amandla okufumana uthando olusulungekileyo, olunyanisekileyo, oluthembekileyo kunye nolwemvelo.
Ngale ngelosi ingumlondolozi uJeliel, ndibiza indalo yonke ukuba indivumele ndibone uthando lokwenene ukuze ndibenobomi obuzalisekileyo.
Ndiboleke uncedo noncedo.
Ingelosi yakho ekugcinayo inokuzama ukunxibelelana nawe ngamanani eNgelosi, sukulinda ukufumanisa. Funda yonke into malunga nefuthe leengelosi.
* Umthombo woncwadi: Ingelosi iNumeri 101, umbhali; UDoreen Virtue, Ipapashwe ngo-2008 kwaye iyafumaneka apha: https://www.amazon.com/Angel-Numbers-101-Meaning-Sequences/dp/1401920012
Ungamtsala njani uMntu oMhlaza: Fumana ezethu iiNgcebiso eziPhambili zokuSusa
Konke malunga neWoodpecker; Umhlaza woMoya Wezilwanyana
Iyintoni intsingiselo yendawo yonke yenombolo 3
lithetha ukuthini inani u-5
amanani endlela yobomi anentsingiselo
Ndihlala ndibona u-1234 kwikloko
wenza ntoni 4:44
Ngoobani scorpios umdla